आज बिहान ६ः४५ बजे हाम्रो पार्टी नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)का केन्द्रीय सदस्य तथा पूर्व शिक्षामन्त्री क.धनिराम (डिआर) पौडेलको ५३ वर्षको उमेरमा हृदयघातका कारण दुःखद् एवं असामयिक निधन भएको छ । हाम्रो पार्टी कमरेड धनिराम (डिआर) पौडेलप्रति भावपूर्ण श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्दछ । दुःखको यस घडीमा शोकाकुल परिवारजन तथा आफन्तप्रति गहिरो समवेदना व्यक्त गर्दछ ।
बुबा हरिप्रसाद पौडेल र आमा हिमादेवी पौडेलको कोखबाट वि.सं. २०२३ कार्तिक ४ गते तात्कालीन दरौ गा.वि.स., कुन्चेवारी, स्याङ्जामा जन्मिनु भएका क. धनीराम (डिआर) पौडेल २०३७ सालदेखि वामपन्थी विद्यार्थी आन्दोलन हुँदै कम्युनिष्ट पार्टीमा सक्रिय रहनुभएको थियो । नेकपा (चौथो महाधिवेशन)को विद्यार्थी संगठनको कार्यकर्ता हुँदै राजनीति सुरु गर्नुभएका उहाँ २०५१ मा तात्कालिन अनेरास्ववियु (क्रान्तिकारी)को केन्द्रीय संयोजक समेत बन्नुभएको थियो ।
२०३८ सालमा नेकपा (चौम) को सदस्यता लिनुभएका उहाँ २०४४ सालमा पार्टीको चितवन जिल्ला सदस्य हुनुभएको थियो । उहाँ अखिल नेपाल जनवादी युवा लिगको संस्थापक केन्द्रीय सदस्य समेत हुनुहुन्थ्यो । बिगतमा लामो समय उहाँले पार्टीको वैचारिक मुखपत्र ‘जनएकता’ साप्ताहिकको सम्पादक भई पत्रकारिता समेत गर्नुभएको थियो ।
तत्कालिन नेकपा (एकताकेन्द्र मसाल) र नेकपा (माओवादी)सँग एकीकरण भएपछि बनेको एकीकृत नेकपा (माओवादी)को पोलिट्व्युरो सदस्य हुनुहुन्थ्यो । उहाँले पार्टी संगठनमा पुर्व, मध्य र पश्चिम नेपालमा काम गरेको अनुभव संगाल्दै २०७० सालको संविधान सभामा सभासद् र शिक्षा मन्त्रीको जिम्मेवारी कुशलतापूर्वक पुरा गर्नुभएको थियो । उहाँले उच्चस्तरीय राष्ट्रिय शिक्षा आयोगको सदस्यका रुपमा शिक्षाको नीति–निर्माणसहित दिवाकर स्मृतिग्रन्थ पुस्तकको सम्पादन गरिरहुनुभएको थियो । हाल उहाँ नेकपा (माओवादी केन्द्र) र नेकपा (एमाले)का बीच एककीकरण पश्चात् बनेको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)को केन्द्रीय सदस्य हुनुहुन्थ्यो ।
सादा र सरल जिवनशैली अपनाउँदै आउनुभएका पौडलको असामयिक निधनले सिंगो पार्टी पंक्ति र नेपाली कम्युनष्टि आन्दोलनमा अपुरणीय क्षती भएको छ । यस शोकको घडीमा क. धनिराम (डिआर) पौडेल प्रती हाम्रो पार्टी पुनस् भावपूर्ण श्रद्धाञ्जली व्यक्त गर्दछ ।